Raw Unifiram Powder (272786-64-8) Ndị na-emepụta ya - Phcoker Chemical
Raw Unifiram (DM-232) ntụ ntụ bụ nnukwu ike AMPAkine-dị ka nootropic na mmetụta antiamnesic na mmụba nke cognition na….
Unifiram ntụ ntụ (272786-64-8) video
Unifiram ntụ ntụ (272786-64-8) Nkọwa
Unifiram ntụ ọka, nke a makwaara dị ka DM-232, bụ ọgwụ ọhụrụ na-adịghị ọhụrụ. Nhazi ya dị ka ampakine, ya na njikọ SRaw Unifiram bụ ntụ. Unifiram ntụ ntụ bụ otu n'ime ihe mgbakwunye ụbụrụ kachasị ike, ọ na - enwekwa mmetụta na mmetụta ndị ọzọ n'ọmụmụ ihe ụmụ anụmanụ ruo ugboro puku ugboro karịa ike piratetam. A na-egosiputa Unifiram ntụ ntụ iji belata oge nke hypnosis nke pentobarbital bu, na-enweghị ihe mgbochi mgbagwoju anya. Raw Unifiram ntụ ntụ bụ ezigbo allosteric AMPA nhazi modulator.
Unifiram uzuzu (272786-64-8) Smmezi
Product Name Unifiram ntụ ntụ
Chemical Aha DM-232, CHEMBL140717, CTK0J2726, DTXSID00432024, AKOS017975218,2-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-6(2H)-one;(8aR)-2-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-6(2H)-one;Pyrrolo[1,2-a]pyrazin-6(2H)-one, 2-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]hexahydro-
molekụla Fnhazi C13H15FN2O3S
molekụla Wasatọ 298.3332032
Nkịtị Monoisotopic 298.079 g / mol
Agba White White
Sume Mmiri soluble
Sịkwa akwa Tigwe OZI NKE AKWỤKWỌ
Unifiram ntụ ntụ Antinye Mmebi nke Alzheimers, Ọgwụgwọ Coness Disorders, Ọgwụgwọ nke NEUROLOGIC DRUGS
raw Unifiram ntụ ntụ (272786-64-8)
Unifiram ntụ ntụ (272786-64-8) Mechanism of actions?
Unifiram bụ onye dị mma nke na-akwado ndị na-akwado AMPA gị. Dị ka ihe dị mgbagwoju anya, Unifiram mmetụta glutamate na-ebute ụbụrụ na-eme ka ịmekọrịta synaptic dị mma n'etiti eriri.
Unifiram na-akwalite mmepụta acetylcholine na-eme ka usoro ya rụọ ọrụ yiri Noopept, Pramiraceta, Oxiracetam na racetam ndị ọzọ nootropics.
Enweghi ihe omuma n'ime Unifiram karia onye ozo Sunifiram, ma ihe omuma abuo a nwere njikọ chiri anya ma kwenyere na ha na aru oru.
uru of Unifiram ntụ ntụ (272786-64-8)
Dị ka ndị na-ahụ maka Ọkachamara, Unifiram kweere na ime ka mmụta, ncheta, uche, ike iche echiche na cognition bụ isi.
-atụ aro Unifiram ntụ ntụ (272786-64-8) Ọgwụgwọ
Ndị na-achọ iji unifiram ntụ ntụ kwesịrị ịmalite na obere doses mgbe na-enyocha mmetụta na Unifiram nwere n'ahụ ha na-arụ ọrụ. Enwere ike ịgbatị usoro ahụ mgbe ahụ na-eji ya eme ihe. Ị nwere ike ịmalite na milligram nke 5 kwa ụbọchị.
mmetụta of Unifiram ntụ ntụ (272786-64-8)
N'ọnọdụ ụfọdụ, a na-akọ akụkọ ọnụego ọkụ n'obi. Nke a nwere ike ime ka ọbara mgbali elu. Mgbe nkwonkwo unifiram ntụ ntụ dị oke ọkụ, enwee ike ịchọta uzo na isi ọwụwa. N'ọnọdụ ndị ọzọ, a ga-edebanye aha afọ ntachi na imeghari obi na-adịghị mma. Ka ọ dị ugbu a, ọ dịghị esemokwu banyere Unifiram na ihe mgbakwunye ndị ọzọ ma ọ bụ ọgwụ.